बाख्रा, रेडियो र राजु परियार!
लमजुङ जिल्लाका एक बालक जो सधैँ रेडियो बोकेर गोठालो जान्थेँ। बाख्राको पछि पछि उनी जंगलभरि डुल्थे। अहिले जस्तो गाउँघरमा पहिले एफएम रेडियोहरु थिएनन्। र्निविकल्प केवल रेडियो नेपाल बज्थ्यो । त्यहि ..
दयालु दुर्गेश, फ्रिमा खेले म्युजिक भिडियो!
मोडल तथा गायक दुर्गेश थापाले नव गायिका पुष्पा शर्माको म्युजिक भिडियोमा फ्रिमा अभिनय गरेका छन्। गायिका बन्ने अपुरो सपना बोकेर जिवनसँग लडिरहेकी पुष्पा शर्मा रगत सम्बन्धि रोगबाट पीडित छिन्। समय ..
लगातार हिट गीत दिने राजनराज शिवाकोटी
केहि बर्ष पहिला भनिथ्यो, चलचित्र चल्नको लागि त्यसको कथाबस्तु, काम गर्ने कलाकारहरु र फाईट गर्ने भिलेन गज्जबको हुनुपर्छ तर अहिले चलचित्रको सांगितिक पाटोलाई चलचित्रलाई जत्तिकै महत्व दिन थालिएको छ । ..
दुर्गेशले पाए सर्वोत्कृष्ट मोडलको अवार्ड, अरु कस्ले के के पाए ?
दुर्गेश थापाले सर्वोत्कृष्ट मोडलको अवार्ड हात पारेका छन्। आईतवार काठमाडौँमा भएको छैठौँ म्युजिक खबर अवार्डमा दुर्गेशले पुरुष लोकदोहोरी विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट म्यूजिक भिडियो मोडलको अवार्ड जितेका हुन् । उनले तिमी फूल ..
अनुज चिलुवालको’तिम्रो बाटो'(भिडियो)
एस.ए.भिजनको ब्यानरमा गायक कृष्णनाथ योगीले पछिल्लो पटक स्वर दिएको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। ‘तिम्रो बाटो’ भन्ने बोल रहेको उक्त गीतको भिडियोमा विभिन्न भिडियोहरुमा अभिनय गरिसकेका चर्चित मोडल मोडल अनुज ..
के ‘बोधो’ हुँदैछ पशुपति शर्माको दिमाग ?
पशुपति शर्मा मिठो स्वरका धनी त हुन नै । उनी राम्रो गित पनि लेख्छन् र गितमा उत्कृष्ट लय पनि भर्छन् । तर पशुपति अक्सर गायककै रुपमा चिनिन्छन् । उनले लेखेका ..
ईन्दिराको जन्मदिन, बाहिरिएकी थिईन् ‘नेपाली तारा’को पाचौँ स्थानबाट
नेपाली साकिराको रुपमा चिनिएकी नायिकाजस्ती गायिका हुन् ईन्दिरा जोशी । उनले गीत गाउनेमात्र नभएर केही गीतहरुमा आफैँले मोडलिङ समेत गरेकी छिन् । नवलपरासीको परासीमा २९ बर्षअघि जन्मिएकी उनलाई सानैदेखी गाउन ..
विहेअघि जुनुले ‘दाई’ भन्थिन् रामचन्द्रलाई !
नेपाली संगित क्षेत्रमा गायक रामचन्द्र काफ्ले र जुनु रिजाल काफ्लेको जोडि चर्चित छ । उनीहरुले थुप्रै चर्चित गितहरुमा पनि सँगै आवाज दिएका छन् । वैवाहिक जिवनको १० वर्ष पुरा गरिसकेका ..